Banxenxa umengameli ukuba avumele imicimbi - Ilanga News
Home Izindaba Banxenxa umengameli ukuba avumele imicimbi
Bakhathazekile ngokuthi isikhathi sokufuna abaxhasi siyabaphelela
UMnu Tate Mchunu ohlela uMgababa Beach Festival, u-Ayanda Ncwane ongumhleli weGospel All Stars no-Mnu Mdu Ngcobo ohlela iDurban Jazz Festival, bacela umengameli ukuba angaqinisi isandla kolwemicimbi.
BASHAYA indesheni kuMengameli Cyril Rama-phosa abanye abahleli bemicimbi ethanyelwa yizinkumbi zabantu ngamaholide kaZibandlela (December), bathi bacela akhiphe izwi yize isikhathi sokuyihlela sesidliwe yinja abavumele ukuba bajabulise abantu ngokukhululeka noma kube wusuku nje olulodwa.
U-Ayanda Ncwane ongumhleli weGospel All Stars eba mhla ka-31 kuZibandlela (December) minyaka yonke, utshele ILANGA ukuthi uma umengameli engabadedeli, kuyoba buhlungu kakhulu kuyena ngoba ubefuna ukukhokha izikweletu zangonyaka odlule.
“Ngonyaka odlule kawubanga khona lo mcimbi ngenxa yezihibe ezazikhona. Kulokhu ngizimisele ngokukhipha unyawo kanti kuningi ebengikuhlelile ukujabulisa abathandi bomculo we-gospel,” kusho yena.
Uthi konke kumi ngomumo kodwa balinde izwi likamengameli. “Ngingaguqa ngisho nokuguqa uma nje engasikhulula noma usuku olulodwa sijabulise abantu,” kusho u-Ayanda.
Uzakwabo kule ndima, uMnu Mdu Ngcobo ohlela iDurban Jazz Festival edonsa amehlo ezivakashi eziningi uthi uma umengameli esamile esibalweni sabantu abawu-500 abavumeleke ukuthamela umcimbi endaweni evulekile, kuyacaca ukuthi umcimbi wakhe ngeke wenzeke.
“Abantu abasebenza kwiDurban Jazz Festival bangaphezulu kuka-2 000, lokho kusho ukuthi kwayibona bebodwa sebeseqile isibalo sikamengameli. Uma esikhulula, sizokwazi ukuyenza i-jazz yabantu,” kusho uNgcobo.
Ukhale kakhulu ngokuthi isikhathi sokufuna abaxhasi siyabaphelela, ngakho-ke uma umengameli ekhipha izwi sekusondele usuku lomcimbi, kuzobalimaza kakhulu lokho, okungaholela ekutheni umcimbi ubhuntshe.
UMnu Sipho Ndaba weLast Dance eyenzelwa ngaphansi kukaMasipala waKwaDukuza neDrakensburg Extravaganza, uthi uhulumeni akumele ubuke imicimbi yabo njengento yenjabulo kuphela, kodwa kumele ukhumbule ukuthi bavula amathuba emisebenzi, basondeze nezivakashi ukuba zishiye umnotho endaweni okusuke kwenzeke kuyona umcimbi.
“Injabulo yinto yokugcina, inhloso wukwakha amathuba emisebenzi nokuheha izivakashi.
“Uhulumeni mawenze njengoba wenzile kwezokuthutha, okungamatekisi namabhanoyi. Zonke lezi zithuthi zilayisha u-100% kodwa thina sikalelwe isibalo. Kuzoba nzima ukuqhubeka uma isibalo sisami kanjena,” kusho yena.
Unxuse abaxhasi wathi uma kwenzeka uhulumeni ulikhipha izwi, bayabacela ukuba bangabashalazeli ngoba uma bengekho bona, umcimbi kawubi khona.
UMnu Tate Mchunu osebenza ngokubambisana noT’zozo kuMgababa Beach Festival, uthi basazobheka ukuthi bazowumisa kanjani lo mcimbi ngoba uba nabantu abaningi.
“Umcimbi ozoba khona yilona wezemidlalo oba mhla ka-16 kuZibandlela ngoba wona kawuhehi abantu abaningi,” kusho uMnu Mchunu.
Previous articleKuthungathwa izihlobo zomfanyana
Next articleAkazisoli ngokushiya umsebenzi